“RDJ Mozika 2018”: misokatra ny fifidianana izay ho “Mpanakanton’ny taona 2018” | NewsMada
“RDJ Mozika 2018”: misokatra ny fifidianana izay ho “Mpanakanton’ny taona 2018”
Iza no hisalotra ny anaram-boninahitra “Mpanakanton’ny taona 2018”? Ho fantatra mandritra ny lanonana makotrokotroka, hotontosaina ny 2 febroary izao io.
Samy miandry ny vokatra ny mpanakanto sy ny mpankafy… Nampahafantarin’ny tompon’andraikitry ny onjam-peo RDJ omaly, tetsy amin’ny Skate Park Antanimena, fa mizotra soa aman-tsara ny fifidianana isan-tsokajy, ho an’ireo notsongaina hifaninanana anatin’ny “RDJ Mozika 2018”.
“Fisafidianana manaraka ny rafitra teknika ao amin’ny onjam-peo RDJ izy ity. Notsongaina avy amin’ireo hira mandeha, sy ny fiaraha-miasa eo amin’ny onjam-peo sy ireo mpanakanto na mpikarakara hetsika izany. Misy sokajy 21 ao, navahana araka ny karazana mozika nisongadina tamin’iny taona iny, ary efa nanomboka fotoana elaela izay ny fifidianana amin’ny alalan’ny SMS sy ao amin’ny tranonkala. Hanomboka anio kosa ny fifidianana izay ho mpanakanton’ny taona, ao amin’ny tranonkala”, hoy ny nambaran-dRasolojaona Tahiana, tale jeneralin’ny onjam-peo RDJ, omaly.
Toy ny efa mahazatra isan-toana, haka endrika lanonana makotrokotroka izany, hotontosaina eny amin’ny lapan’ny Kolontsaina Mahamasina, ny asabotsy 2 febroary ho avy izao. Ankoatra ireo mpanakanto notsongaina izay sady hasaina ho avy ao, hisy koa ny fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy amin’io fotoana io. Handeha amin’ny fahitalavitra vitsivitsy ihany koa izany, ny alahady, ho an’ireo tsy afaka hijery mivantana.